Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanaovan-gazety: Manao angoan-tenda mila anditra indray i Rolly Mercia
Fanaovan-gazety: Manao angoan-tenda mila anditra indray i Rolly Mercia
« Lokanga tsy atao ka mahabe voatavo ». Ohabolana saro-takarina io, nefa dia azo tarafina amin’ny vontoatin’izany fomba fiteny malagasy izany ny fihetsika amam-pitondran-tena mbamin’ny fanamarihana ataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny, raha tsy hiteny afa-tsy ny fanambarana navoakan’ny minisitra ny Fifandraisana, Harry Laurent Rahajason na i Rolly Mercia omaly izahay.
Nokianiny mafy tao fa « misy mpanao gazety izay misitraka ny fahalalahana maneho hevitra efa manakiana ny lalàna momba ny fifandraisana izay miantoka ny fahalalahana manao gazety ». « Izy ireny », hoy i Rolly Mercia, « dia manivaiva sy manevateva olona, tsy manaja ny fitsipika moraly sy ny fitsipi-pitondran-tena maha-mpanao gazety ka manala baraka ny asa fanaovan-gazety ».
Ô leiretsy e ! Satria ve minisitra i Rolly Mercia amin’izao fotoana dia mihevi-tena ho anjely fa devoly avokoa izay mpanao gazety tsy manao tokim-panompoana ny Hvm ? Fony mpanao gazety ange i Rolly Mercia ka manoatra lavitra noho ny afitsoky ny ambarany amin’izao fotoana fa tsy manaja ny fitsipika moralin’ny mpanao gazety no ataon’ny sasany e ?
Ary hatramin’izao ange ka fantatra ihany fa tsy olonolom-poana amin’ireo haino aman-jery aman-gazetin’ny Hvm i Rolly Mercia nefa toa tsy kianiny ny lahatsoratra manevateva sy karazan’ny manompa mihitsy na manenjika anjambany ny hafa ? Satria ve tsy mpitondra fanjakana ohatra ireo Raiamandreny ara-panahy ao amin’ny Ffkm ka nasiana mafy ho isan’ny mpanongam-panjakana raha namoaka fanambarana farany teo momba ny fiainam-pirenena, izay nivantana namatotra andraikitra ny mpitondra ?
Satria ve tsy manam-pahefana ara-panjakana ny mpisehatra pôlitika avy amin’ireo ivelan’ny fitondrana na mpanohitra, hoy ny sasany, dia hosoram-potaka sy tsy manan-kasina mihitsy amin’ny lahatsoratra avoakan’ny gazetin’ny Hvm momba azy ireny ?
Fanehoan-kevitra malalaka no atao ary famakafakana no ambara. Ny ankoatra izay, raha misy fandikan-dalàna hita fototra momba ny lalàna famaizana, dia ao ny Fitsarana manana ny fahaiza-manao momba izany fa aoka tsy i Rolly Mercia no hiana-kendry hanome lesona eto fa izy aza no tokony omena lesona.